Home » အသားပေး » #NABSHOWNY: Broadfield အနီရောင်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အတူဖြန့်ဖြူးမိတ်ဖက်ကြေညာ
Broadfield ဝြေခင်း Inc က တရားဝင်အားဖြင့်ဖြန့်ဖြူးမိတ်ဖက်ကြေညာလိုက်ပါတယ် အနီရောင်ရုပ်ရှင်ရုံ MONSTRO 2K VV, ဟီလီယမ် 8K S8 နှင့် Gemini 35K S5 မှာ: နှင့်အများပါဝင်သည့်တစ်ခုလုံးကို DSMC35 ကင်မရာလိုင်းပူဇော်ပါလိမ့်မယ် #NABSHOWNY အစောပိုင်းကယနေ့နံနက်။
ဂယ်ရီ Bettan, Broadfield စာ Said သမ္မတ "ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်လိုင်းများတိုးချဲ့ဖို့ပျော်ရွှင်နေကြသည်ငါမူကားတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့ဤစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပြီမဟုတ်! အဆိုပါအနီရောင် DSMC2 ပလက်ဖောင်း၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်အနီရောင်ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာစိတ်ကြိုက်ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးကမ္ဘာ့အဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျနော်တို့ Mineola ၌အကြှနျုပျတို့၏ရုံးချုပ်သစ်သို့ပြောင်းရွေ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်လာသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူကျွန်တော်လီဗာပူးရုပ်သံလိုင်းချောမွေ့ခြင်းနှင့်အသစ်နှင့်တည်ဆဲအနီရောင်ကုန်သည်တွေပိုမြန် turnaround, တိုးတက်လာသောထုတ်ကုန်ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအားငါပေးမည်။ ဒါဟာငါတို့ကုန်သည်တွေမှအနီရောင်ရောက်စေဖို့အတှကျစုံလင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ "
Broadfield အပေါငျးတို့သဆက်စပ်ပစ္စည်း, မီဒီယာနှင့် Long Island မှာရရှိနိုင်ပါကအခြားအနီရောင်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ရှိသည်လိမ့်မယ်, အပြည့်အဝ frame ကိုရုပ်ရှင်မှန်ဘီလူးလွှမ်းခြုံကမ်းလှမ်းသောအနီရောင် MONSTRO 8K VV အပါအဝင်နယူးယော့ဂိုဒေါင်, Ultra-အသေးစိတ် 35.4-megapixel တစျခုခုတို့ကိုထုတ်လုပ်နှင့်ပြောင်းလဲနေသော၏ 17 + မှတ်တိုင်များကယ်တင်တတ်၏ အကွာအဝေး။ အဆိုပါဟီလီယမ် 8K S35 အစဉ်အဆက်အမြင့်ဆုံး DxO ရမှတ်များလက်ခံရရှိသူနှင့်စူပါ 16.5 ဘောင်အတွက် dynamic range ကို၏ 35 မှတ်တိုင်များကျော်ကယ်တင်တတ်၏။ Gemini 5K S35, ဖန်တီးသူကောင်းစွာ-lit အခြေအနေများသို့မဟုတ်မှောင် enviroments မှာ သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေး dual-sensitivity ကို Modes သာ leverages ။
တဲ N119 မှာအားဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့သေချာပါစေ #NABSHOWNY သို့မဟုတ် 800-634-5178 သို့မဟုတ် e-mail, မှာ Broadfield အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုပဌနာ [အီးမေးလျ protected] စျေးနှုန်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အဘို့။
Broadfield စာ Inc က 1980 ကတည်းကဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဦးဆောင်ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူစိုက်ပျိုးခဲ့ကြပြီးယခုကျနော်တို့တင်ပို့ဖို့အဆင်သင့်, In-စတော့ရှယ်ယာထုတ်ကုန်များ၏ထက်ပို 40 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာထံမှဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်များကိုကမ်းလှမ်းရန်ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။ အတိတ် 30 နှစ်များတွင်ငါတို့သည်ငါတို့၏သစ္စာစောင့်သိဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဆွေများကကုန်သည်တွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပဌနာကိုဂုဏ်ယူခဲ့ကြပါပြီ, ကြှနျုပျတို့အောင်မြင်မှုနောက်လာမည့် 30 နှစ်ပေါင်းမျှော်လင့်! Broadfield မှာထံမှဝယ်ယူ၏အားသာချက်များကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ www.broadfield.com
အေျကာင္းအရာ NAB ပြရန် New York
လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံးကထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူပူးတွဲတည်ရှိသည် အသံအင်ဂျင်နီယာ Society က'' s ကိုအရှေ့ကမ်းခြေစည်းဝေးကြီး NAB ပြရန် မှာ 17, 18 - နယူးယောက်မြို့အောက်တိုဘာလ 2018 ကျင်းပလိမ့်မည် Javits ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ။ ထက်ပိုမို 14,000 တက်ရောက်နှင့် 300 + ပြသခဲ့သည်နှင့်အတူ, NAB ပြရန် New York ကမီဒီယာများအတွက်မျိုးဆက်သစ်နည်းပညာ, ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ညီလာခံနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အတူဖျော်ဖြေရေးနှင့်တယ်လီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, ရုပ်ရှင်, အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးတယ် ဂြိုဟ်တုအွန်လိုင်းဗီဒီယို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်များ, podcasts, ကြော်ငြာ, ကော်ပိုရိတ် A / V ကို, ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit တီဗီနည်းပညာ	2018-10-17
ယခင်: Dielectric Market က-စီး 500th Spectrum Repack အင်တင်နာမှတ်တိုင်ရောက်ရှိ
နောက်တစ်ခု: Pitt ပြေးခုံပစ်, NEP Group မှ Partner; Pitt Studios ကလွှတ်တင်
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဧပြီလ 2019 (425) မတ်လ 2019 (622) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (325) ဇန်နဝါရီလ 2019 (280) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (243) နိုဝင်ဘာလ 2018 (406) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (397) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (779) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (684) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (606) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (123) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (357) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)